Olona enina, renim-pianakaviana iray 35 taona sy ny zanany dimy mianadahy, 10 taona, 6 taona, 3 taona, 2 taona ary zaza vao 5 volana, no niara-namoy ny ainy tao Maromandraisoa, Kaominina Sahanivotry, Distrika Antsirabe II Faritra Vakinankaratra. Ny 9 hifoha ny 10 septambra 2020 no niseho ny loza. Mpanao saribao ireto fianakaviana ireto. Entona avy amin’ny afon-tsaribao tsy maty tao an-trano no tombanana ho nanempotra ka nahafaty azy eni-mianaka, araka ny fitsirihana nataon’ny dokotera avy ao amin’ny CSB I Sahanivotry. Tsy tao an-toerana, fa tany Antsirabe ny raim-pianakaviana tamin’ny fotoana nisehoan’ny loza, ka izy niverina tao an-tanàna no nahita ny vady aman-janany nitsirara tao an-trano.
Notoloran’ny « Fondation BOA » sy ny « Madagascar International Container Terminal Services » « ambulances » ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, androany 14 septambra 2020. « Mbola mitohy ny ady amin’ny coronavirus ka ilaina ny fanomezan-tanana tahaka izao » hoy ny Minisitra Rakotovao Jean Louis Hanitrala.Nilaza ity farany fa nahitana fihenana ireo isan’ny olona voan’ny coronavirus, ary ireto fiara ireto dia hanampy betsaka amin’ny fandraisana an-tanana ireo marary. Ho aparitaka any amin’ireo toerana saro-dalana ireto fiara ireo. Ny fananana ireto « ambulances » tsy mataho-dalana ireto dia hanome fahasalamana manaja ny maha olona hoan’ny vahoaka malagasy, hoy hatrany ny minisitra. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 13 septembre 2020 18:48
Fandikan-dalàna: 25 ireo "receveur" Taxibe nampanaovina asa iombonana
25 ireo "receveur" Taxibe tsy manao na mampiakatra « visière » voatery nampanaovina asa iombonana. 71 ireo olona tratra tsy nanao Arotava ka nohamafisina indray ny asa iombonana nomena azy ireo. Miisa 14 ireo mpivoaka alina nampidirina « violon » hita tsy nanao arotava no sady mbola mivezivezy tsy nanaja ny "Couvre-feu". (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 13 septembre 2020 12:04
Tsiroanomandidy: Tranombarotra mpamongady iray rotiky ny afo
Nitrangana haintrano tao akaiky ny tsena Tsiroanomandidy ny sabotsy hariva 12 septambra 2020. Tamina tranombarotra mpamongady iray no niainga ny afo, nanodidina ny tamin’ny enina ora hariva. Sarotra ny fifehezana ny afo. Rano notaomina amin’ny daba sy siny no nezahan’ny olona nifanome tanana natondraka noho ny tsy fisian’ny mpamonjy voina eto an-drenivohitry ny Faritra Bongolava. (Jereo Sary Tohiny)
Sanganehana ny ray aman-dreny mampiana-janaka amin’ny sekolim-panjakana eto an-drenivohitra rehefa nandray taratasy avy amin’ny sekoly ianaran’ny zanak’izy ireo, milaza ireo taratasy ilaina sy ny vola aloa amin’ny fisoratana anarana. Taorian’ny fanambarana nataon’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ny alahady 6 septambra, nohamafisin’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Sahondrarimalala Marie Michelle fa maimaimpoana ny fisoratana anarana amin’ny sekolim-panjakana dia mihevitra ireo ray aman-dreny fa tsy misy fanavahana izany, fa mihatra ho an’ny EPP, CEG ary Lycée.
Fihetsiketsehana vao maraina, narahina filanjana sorabaventy, no tazana teo amin’ny Gare Routière Aranta – Mahajanga androany sabotsy 12 septambra 2020. Manohitra ny fametrahana "Caisse unique" ny mpiasa sasany.
Sorabaventy samihafa maneho ny alahelon’ny mpiasan’ny fahasalamana no tazana eo amin’ny hopitaly manarapenitra Tanambao Antsiranana taorian’ny nanesoran’ny fanjakana tamin’ny toerany ny Talen’ny hopitaly. Marihina fa nofoanana nandritra ny Filankevitry ny minisitra natao teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha-ny alarobia 09 septambra 2020 ny didim-panjakana laharana faha-2019-2220 tamin’ny 11 desambra 2019 nanendrena ny «Directeur d’Etablissement Centre Hospitalier Universitaire Tanambao Antsiranana ».
vendredi, 11 septembre 2020 12:15
Malagasy avy any ivelany: Nisy 187 tonga omaly
Teratany Malagasy miisa 187 indray no tafody an-tanindrazana, nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny alakamisy 10 septambra 2020. Nihitsoka tany Chine talohan’ny nihidin’ny sisintanin’i Madagasikara noho ny valanaretina coronavirus. Tao Guangzhou izy ireo no nandray ny sidina Air Madagascar niazo an’Antananarivo. Natao fitiliana PCR avokoa izy ireo teo ampahatongavana, avy eo nahiboka miandry ny valin’ny fitiliana natao azy ireo. Afaka mamonjy fianakaviany ireo tsy ahitana tsimok’aretina Covid-19, alefa tsaboina avy hatrany ao amin’ny CTC Mahamasina kosa izay misy tsimok’aretina Covid-19 tamin’ny fitiliana natao azy ireo.
jeudi, 10 septembre 2020 21:51
Antsongo-Antsirabe I: Nitokona noho ny lisitra « Vatsy Tsinjo » tsy nazava ny mponina
Tonga teny amin’ny biraon’ny Fokontany Antsongo-Antsirabe I ny Fokonolona ao an-toerana, androany Alakamisy 10 septambra tokony ho tamin’ny 9 ora maraina teo ho eo. Manohitra ny famoahan’ny tompon’andraikitry ny Fokontany ny lisitr'ireo hisitraka « Vatsy Tsinjo » ny olona.Tezitra ny maro fa tsy tao anatin’ny lisitra ny anaran’ireo izay tena hita fa sahirana, kanefa dia hitan’izy ireo tao anatin’ny lisitra ireo olona antsoin’ny eny an-tanana hoe “Debadeba” sy manan-katao, ary tsy azo heverina ho sahirana akory. Raikitra ary ny tsoka kiririoka namoriana ny rehetra ary samy nijery ny anarany tao. Vao maika niakatra ny hatezeran’ny olona. Milaza ny komity misahana io fakana anarana io fa samy noraisina avokoa ny anaran'ny mponina tokony hahazo, saingy teo imaso teo ihany dia nahazo horakoraka ary nambaran'ny mponina fa tsy marina izany.
Page 3 sur 591